China SUS304 ngwakọta 24 isi multihead weigher ụlọ ọrụ na-emepụta | Ibe Smart
Ngwakọta SUS304 24 isi multihead weigher
Ngo iri abụọ na anọ nwere ike itu ma gwakọta ụdị ngwaahịa abụọ 2-8 n'otu oge, ọ na-abụkarị maka agwa, ọka, mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi na-ata, nri mmiri na-agwakọta.
Ihe Owuwu: SUS304
Mpempe igwe: 4 okpokoro isi
Olu Hopper: 0.8L / 1L
Nri Kpọtụrụ nri Mbadamba efere / Embossing plate
Top cone na-arụ ọrụ Style: Omume ọma jijiji
Ngwakọta: Ụdị 4-6
Waterproof ọkwa: IP65
Usoro nchịkwa: Njikwa modular
Ego pere mpe: 1 setịpụrụ
SW-M324 multihead weigher bụ na 3 n'ígwé hopper: na-eri nri hopper, tụọ hopper na hopper na ebe nchekwa. Smart Weigh nwere ihe ohuru ohuru nke hopper 24 dị mkpa: onye na -ewe ihe hopper na ebe nchekwa hopper ga-arụkọ ọrụ maka ijikọ ọnụ.
Akpa 50 / min
10 ”ihuenyo mmetụ
220V 50 / 60HZ, otu oge
Stepper moto (modular ịnya ụgbọ ala)
Ihe agwakọta otutu isi ihe dị mma maka ụdị ngwaahịa dị iche iche, ọ nwere ike iru oke ma gwakọta n'otu oge. Chekwaa ohere ma belata ụgwọ ọrụ igwe.
• Mixgwakọta ụdị ngwaahịa 2-6 maka nhọrọ, na ihe ncheta dị elu na oke nkenke;
• ụdị ụdị dị 3 dị: ngwakọta, ejima & otu ngwugwu;
• Ibelata ihe mgbochi na - egbochi ihe mgbochi;
• Food kọntaktị akụkụ disassembling enweghị ngwaọrụ, mfe ọcha.
Ihe osise igwe
Smart Weigh na-enye nlele 3D pụrụ iche (ihe nkiri nke anọ dị n'okpuru). Nke a bụ 3 ngwakọta 24 isi multihead weigher.
Ngwunye ngwongwo dị
Igwe eji ebu ihe dị ogologo na-adị ogologo nwere ike ime akpa ohiri isi ma ọ bụ akpa akpa. Akpa na-eme site na mpịakọta ihe nkiri.
14 isi dị na igwe na-eji igwe na-ebugharị ebugharị arụ ọrụ. O kwesịrị ekwesị maka ụdị akpa akpa akpa, dịka doypack.
14 isi na-arụ ọrụ na tray denester. Ọ nwere ike nweta ihe efu akpaghị aka nri, akpaaka na-erikpu ma na-ejuputa n'ime trays, akpaaka izipu okokụre trays ka akụrụngwa ọzọ.
Thermoforming / tree mbukota Machine
14 onye isi dị mkpa na-arụ ọrụ na igwe eji egbochi igwe eji ebu ihe
1. Gịnị bụ usoro nchịkwa modular?
Usoro njikwa modulu pụtara sistemụ nchịkwa. Motherboard gbakọọ dịka ụbụrụ, igwe na-achịkwa igwe na-arụ ọrụ. Smart Weigh multihead weigher na-eji usoro nchịkwa modulu nke atọ. Ogwe ntụpọ 1 na-achịkwa hopper nri 1 na 1 na-atụle hopper. Ọ bụrụ na enwere 1 hopper mebiri, gbochie hopper a na ihuenyo mmetụ. Hoppers ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ dịka ọ dị na mbụ. Na bọọdụ mbanye bụ ọsọ na Smart Weigh usoro multihead weigher. Dịka ọmụmaatụ, mba. Enwere ike iji bọọdụ mbanye. Ogwe ụgbọala 5. Ọ dị mma maka ngwaahịa na mmezi.
2. Nke a dị mkpa, nwere ike ịlele 1 dị fere fere?
Ọ nwere ike iburu ibu dị iche iche, gbanwere oke nha na ihuenyo mmetụ. Ọrụ dị mfe.
3. Ngwa igwe a bụ nke igwe anaghị agba nchara?
Eeh, ihe igwe, ogwe ya, na akụkụ akụkụ ahụ ihe eji emetụta nri bụ ihe igwe anaghị agba nchara 304. Anyị nwere asambodo ahụ banyere ya, obi dị anyị ụtọ izigara gị ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
4. Ọ bụrụ na m zụta ntanetị maka ngwaahịa ngwakọta, enwere m ike tụọ ngwaahịa 1 n'ọdịnihu?
Ee. Ọ bụrụ na ọ dị 4 ngwungwu dị arọ, mgbe ị chọrọ ịtụle 200g ngwaahịa, nke ọ bụla dị gị mkpa ịha nha bụ 50g. Ikpeazụ dị 200 gram.
Nke gara aga: SUS304 oke ọsọ 14 isi isi isi dị ogologo
Osote: SUS304 Standard 10 isi multihead weigher
Usoro njikwa modulu pụtara sistemụ nchịkwa. Nne osisi calculates dị ka ụbụrụ, mbanye osisi njikwa igwe na-arụ ọrụ. Smart Weigh multihead weigher na-eji sistemụ nchịkwa modulu nke 3. Ogwe ntụpọ 1 na-achịkwa hopper nri 1 na 1 na-atụle hopper. Ọ bụrụ na enwere 1 hopper mebiri, gbochie hopper a na ihuenyo mmetụ. Hopper ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ dịka ọ dị na mbụ.
Na bọọdụ mbanye bụ ọsọ na Smart Weigh usoro multihead weigher. Dịka ọmụmaatụ, mba. Enwere ike iji bọọdụ mbanye. Ogwe ụgbọala 5. Ọ dị mma maka ngwaahịa na nlekọta.
gwakorita otutu uzo
otutu isi dị
multihead weigher mbukota igwe
Mini elu ziri ezi 14 isi multihead weigher ut ...
SUS304 Standard 10 isi multihead weigher
SUS304 oke ọsọ 14 isi isi isi dị ogologo